Somaliland: Xukuumadda Oo Ka Hadashay Wada Hadalada Somaliya, Wakhtiga La Bilaabayo Jidka Berbera-Wajaale Iyo Dhoofkii Xoolaha Nool Ee Uu Sucuudigu Xayiray - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Xukuumadda Oo Ka Hadashay Wada Hadalada Somaliya, Wakhtiga La Bilaabayo Jidka...
Somaliland: Xukuumadda Oo Ka Hadashay Wada Hadalada Somaliya, Wakhtiga La Bilaabayo Jidka Berbera-Wajaale Iyo Dhoofkii Xoolaha Nool Ee Uu Sucuudigu Xayiray
Xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay inkastoo aanay rajo buuran ku qabin midho ka soo baxa wada hadalada Somaliland iyo Somaliya, haddana ay madaxweynaha Somaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ka rajaynayso inuu si dhab ah u galo wada hadalada.
Waxa ay xukuumadda Somaliland sheegtay in dawladda Soomaaliya ay ka noqotay qodobo lagu heshiiyay intii ay wada hadaladu socdeen, kuwas oo keeni kara inaan rajo buuran laga filan karin bilowga wada hadalada.
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, ayaa wuxuu sheegay in sannadkan la bilaabi doono jidka isku xidha Berbera iyo Wajaale ee muhiimka u ah in dawladda Itoobiya isticmaasho dekedda Berbera. Waxa kale oo uu Wasiir Sacad Cali Shire, sheegay in shaqo la’aanta dhalinyarada Somaliland ay marayso 75% taas oo uu ku tilmaamay mid qayral caadi ah. Wasiirku, wuxuu arrimahan kaga hadlay waraysi uu la yeeshay wargeyska Capital ee ka soo baxa magaalada Addis Ababa ee wadanka Itoobiya.
Wasiirka oo la weydiiyay jidka isku xidha Berbera iyo Wajaale, wuxuu yidhi “Jidka oo inta badan ah jidka isku xidha Berbera iyo Wajaale, waxaanu ku rajo weynahay inuu sannadkan bilaabmo. Jidkan waxa intiisa badan maalgelinaysa dawladda Imaaraadka Carabta. Hadda waxaanu indho-indhaynaynaa la taliyayaal sameeya qaabka iyo farsamada hawsha wadada. Marka la taliyayaasha la xusho ee la isku raaco, hawshu way bilaabmaysaa waxaanan ku rajo weynahay in dhismuhu bilaabmi doono sannadkan.”
Wasiirka oo la weydiiyay sida ay xukuumadda Somaliland u waajahayso shaqo la’aanta dhallinyarada, wuxuu yidhi “Shaqo la’aanta dhallinyarada waxa lagu qiyaasaa 75% oo ah tiro aad u saraysa. Shaqo la’aanta dadka dhawr arrimood ayaa sabab u ah, mid ka mid ahi waa xirfad la’aanta. Dhallinyaradu ma laha xirfado ay ku xoogsadaan oo lagu shaqaalaysiyo. Malagashigu isna waa qodob kale, sababto ah waa inaad heshaa cid doonaysa inay dalka maalgashato si loo awoodo in shaqo abuur la sameeyo.
Ilaha dhaqaalaha ee dawladu aad bay u koobanyihiin mana samayn karto shaqo abuur. Mid ka mid ah mushkiladaha ay nagu abuurtay aqoonsi la’aanta dalkaygu baa ah in aanay nagu soo dhiiran kerin maalgashatadu. Ma fududa inaad dalka u soo jiido maalgashi shisheeye oo toos ah. Yoolkayagu waa inaanu horumarino jawi; abuurno jawi maalgashi oo soo jiidan kara maalgashadayaasha haddii ay yihiin shisheeye iyo maxaliba. “
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, oo la weydiiyay qodob ku saabsan wada hadalada Somaliland iyo Somaliya, wuxuu yidhi “Wada hadalo ayaanu Somaliya la lahayn ilaa sannadkii 2012. Wada hadaladaas waa la hakiyay sannadkii 2015, waxaana la isla gartay in la sugo inta ay Somaliya dooranayso madaxweyne cusub, sannadkii hore ayaanay yeesheen madaxweyne cusub. Bulshada caalamku waxay sidoo kale doonaysay in la sugo ilaa inta doorashadayada la dhammaynayo. Waxaan rajaynayaa inaanu dib u bilaabi doono wada hadaladii, inkastoo mararka qaarkood aanan rajo badan ku qabin inaanu awoodi doono inaanu hore u socod samayno, sababtoo ah waxay ka noqdeen qodobo badan oo aanu wada jir ugu heshiinay. Waxaan rajaynayaa in doorkan uu madaxweynaha cusub ee Somaliya uu wada hadalada si dhab ah u gali doono”
Isagoo wasiir Sacad ka jawaabaya su’aal nuxurkeedu ahaa sababta ay dawladdu Sucuudigu u xayirtay xoolaha Somaliland, wuxuu yidhi “Sida ay sheegtay wasaaradda Beeraha Sucuudigu, waxay yidhaahdeen laba neef ayaanu ka helnay xanuun. Laakiin labadan neef kamay tagin Somaliland, waxayse ka tageen Soomaaliya. Nasib darro, waxa lanoo ciqaabayaa waxa aanu u aragno inaanaan u qalmin. Xoolahayagu way caafimaad qabaan, waxaanu leenahay maxjaro caalami ah, waxaanan rajaynaynaa in xayiraadaas la qaadi doono. Xoolaha nooli waa waxa ugu weyn ee aanu dhoofino, markaas inaanu weynaa dhaqaalahayaga waxay ku tahay dhibaato weyn.”
Somaliland: Telesom Oo Laba Duulimaad Ku Soo Daabushay Lacagtii Zaadka ee Djibouti la geyn jiray
Somaliland: Guddoomiyaha Hay’adda Dhawrista Tayada JSL Oo Kulamo La Yeeshay Ururrada Warshadlayda iyo Daawooyinka Iyo Go’aamo Kasoo Baxay
Somaliland: Xaaji Cabdi Waraabe “Culimadu Yaanay Si Kale U Fahmin, Dunida Waa Lala Macaamilayaa, Baanku Waa Horumar”
Somaliland: “Askariga Codkiisu Wuu U Qarsoon Yahay Laakiin Isagoo Kalsooni Qaran Haysta Laguma Dhex Arki Karo Xisbiyada”